Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka oo ku baaqay in ciidanka lala shaqeeyo – Kalfadhi
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka oo ku baaqay in ciidanka lala shaqeeyo
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maxamed Cismaan Jawaari, ayaa ugu baaqay shacabka in ay la shaqeeyaan laamaha amniga, “si” buu yiri “loogu guuleysto sugista nabad-gelyada”. Warbaahinta Dowladda ayaa baahineysa inuu Xildhibaan Jawaari ku amaanay Ciidanka Dowladda sida ay ugu guuleysteen in ay soo gabgabeeyaan weerarkii ay Al-Shabaab shalay ku qaaday Wasaaradaha Shaqada iyo Hawlaha Guud.
Jawaari waxa uu sheegay inuu ka naxay, kana tacsiyeynayo, geerida Xildhibaan Saqar Ibraahin Cabdalla, oo ahaa Wasiir Kuxigeenkii Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, oo ka mid ah tiro dad ah oo shalay ku geeriyooday weerarka uu ku baxay iyo 4 weerar (qarax) oo kale oo ka dhacday isla Muqdisho shalay. Xildhibaanku waxa uu cambaareeyey weeraradaas, waxa uuna dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ugu Alla baryey Janno iyo Caafimaad.
“Innaa Lillaah wa innaa Illeyhi Raajicuun, Allaha ha u naxriisto dhamaan dadkii ku geeriyooday falkaasi ay argagixisadu geysatay, oo uu ku jiro Wasiirkii Kuxigeenkii Wasaaradda Ahaqada iyo Arrimaha Bulshada, Xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla, Naxriistii jano Allaha haka waraabiyo, intii kale ee ku dhaawacantayna bogsiimo deg deg ah Allaha siiyo” ayuu Jawaari ku yiri Warbaahinta Dowladda.
Baarlamaanka Jubbaland oo meel mariyey Guddiga Doorashooyinka oo xalay la sameeyey